An Momba anay Ny pejy dia iray amin'ireo pejy voatanisa amin'ny lisitra fizahana tranonkala rehetra. Pejy misy fitsikerana kokoa noho ny omen'ny orinasa azy io. Tsara Momba anay pejy dia matetika zahan'ny mpiasa ho avy sy ny mpanjifa hahafantatra bebe kokoa momba ireo olona ao ambadiky ny orinasa iray. Adinontsika matetika fa tsy ny fisongadinana sy ny tombontsoa ihany no tadiavin'ny vinavina - te hanana fahatokisana izy ireo fa hiara-hiasa amin'ireo olona atokisany izy ireo ary tsy hanenina!
Ny Siege Media dia nandinika izay itovizany amin'ireo pejy momba anay Mahomby be, ary nametraka lahatsoratra epiko naseho Ohatra 50 momba ny aingam-panahy momba anay. Novokarin'izy ireo ity sary tsara tarehy ity izay mampiseho fanao 11 tsara indrindra arahana rehefa manamboatra ny anao ianao: